वाणिज्य बैंक(Commercial Bank) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
श्वेतगंगा हाइड्रोपावरले पायो रु. ३९.८२ करोड आईपीओ निष्कासन गर्ने अनुमति
नेप्सेमा थपियो सवा ७ लाख बढी कित्ता सेयर
पुरानो नगद लाभांश बुझिलिन यी सेयरधनीलाई नेप्सेको ताकेता (सूचीसहित)
सुर्खेतमा भोलि ‘डिजिटल कर्णाली संवाद’ आयोजना हुँदै, डिजिटाइजेसनको विषयमा बृहत छलफल हुने
वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप रु. ७ अर्बले बढ्यो, कस्तो छ कर्जा लगानीको अवस्था ?
काठमाण्डौ । जेठको पहिलो साता वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप र कर्जा लगानी दुवै बढेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए)को तथ्यांकअनुसार जेठको पहिलो साता वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ७ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। योसँगै जेठ ६ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत वैशाख ३० गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल...
नबिल बैंकको सीईओमा ज्ञानेन्द्र ढुंगाना नियुक्त, असार १७ बाट कार्यभार सम्हाल्ने
काठमाण्डौ । नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना नियुक्त भएका छन्। गत शनिबार सम्पन्न विशेष साधारणसभाले अनुमोदन गरेको अन्तिम सम्झौतापत्रमा नेपाल बंगलादेश बैंक प्राप्तिपछि नबिल बैंकको सीईओमा ढुंगाना नियुक्त हुने भएका हुन्। नबिल बैंकका कम्पनी सचिव विनयकुमार रेग्मीका अनुसार ढुंगाना आउँदो असार १७...
नबिल–एनबी बैंक मर्जर अगाडि बढ्ने, अदालतमा परेको रिट फिर्ता
काठमाण्डौ । नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ। नबिल र एनबी बैंकबीचको मर्जरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट फिर्ता भएसँगै यो प्रक्रियाले फेरि निरन्तरता पाउने भएको हो। यसअघि सर्वोच्च परेको रिटमा एकल इजलासले तत्काल मर्जर अगाडि नबढाउन आदेश दिँदै दुवै पक्ष छलफलमा डोकेको थियो। त्यसपछि...
वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप रु. १९ अर्बले घट्यो, कस्तो छ कर्जा लगानीको अवस्था ?
काठमाण्डौ । वैशाख महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप र कर्जा लगानी दुवै घटेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए)को तथ्यांकअनुसार वैशाख महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप १९ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। योसँगै वैशाख मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। गत चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल...
गौतमबुद्ध विमानस्थलमा सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत हुने, ५ वटा काउन्टर सञ्चालनमा
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेसँगै आजबाट औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको भैरवाहस्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत हुने भएको छ। यो विमानस्थलमा यात्रु र सेवाग्राहीलाई चाहिने सम्पूर्ण सेवासुविधा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रवाह गर्नेछ। यसका...
जेठमा ब्याजदर नबढाउने बैंकहरुबीच सहमति
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुले जेठ महिनामा ब्याजदर नबढाउने सहमति गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) को मंगलबार बसेको बैठकले जेठ महिनामा ब्याजदर नबढाउने भ्रद सहमति गरेको हो। फागुनमा ब्याजदर बढाएका बैंकहरुले चैत र वैशाखमा पनि ब्याजदर स्थिर राखेका थिए। अब चैतमा पनि ब्याजदर स्थिर नै रहने भएको छ। सरकारको विकास खर्च र निर्वाचनको...
वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप रु. ५ अर्बले बढ्दा कस्तो छ कर्जा लगानीको अवस्था ?
काठमाण्डौ । पछिल्लो एक साताको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप बढेको छ भने कर्जा लगानी घटेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) को तथ्यांकअनुसार वैशाख १७ गतेदेखि वैशाख २३ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। योसँगै वैशाख २३ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४३ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत वैशाख १६...
नबिल बैंकले डाक्यो विशेष साधारणसभा, बुक क्लोजको मिति तय
काठमाण्डौ । नबिल बैंक लिमिटेडले विशेष साधारणसभा डोकेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको आज बिहान बसेको बैठकले विशेष साधारणसभा आउँदो जेठ ७ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभ्ने सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अनुमोदन गर्नेछ। नबिलले नेपाल...
कस्तो छ वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप र कर्जा लगानीको पछिल्लो अवस्था ?
काठमाण्डौ । पछिल्लो एक साताको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुका निक्षेप र कर्जा लगानी दुवै बढेको छ। नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) को वैशाख १० गतेदेखि वैशाख १६ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप र कर्जा लगानी दुवै बढेको देखिएको हो। यो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप १ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। योसँगै वैशाख १६ गतेसम्म वाणिज्य...
सानिमा बैंकको चरम लापरबाही, कीर्ते हस्ताक्षरमा लाखौँ भुक्तानी
काठमाण्डौ । विदेशमा रहेकै अवस्थामा एक व्यक्तिको कीर्ते हस्ताक्षर गरी बैंक खाताबाट लाखौँ रकम झिकिएको काण्ड सार्वजनिक भएको छ। यो काण्ड सुनसरीको इटहरीस्थित सानिमा बैंकको शाखा कार्यालयमा घटेको हो। त्यहाँ खाता रहेको एक व्यक्तिको रकम चेकमा कीर्ते हस्ताक्षर गरी झिकिएको प्रमाणहरु फेला परेका छन्। कमल घिमिरे विगत १३ वर्षदेखि लेबनानमा...
एनएमबि बैंकको इक्रा नेपालद्वारा रेटिङमा स्तरन्नोति
काठमाण्डौ । इक्रा नेपाल लिमिटेडले एनएमबि बैंकको विगतको रेटिङलाई स्तरवृद्धि गरी [ICRANP-IR] A रेटिङ प्रदान गरेको छ। यो रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाहरु समयमा वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा पर्याप्त मात्रामा सुरक्षित मानिन्छन् र यस्ता संस्थाहरुमा न्यून कर्जा जोखिम रहेको हुन्छ। इक्रा नेपाल भारतस्थित इक्रा लिमिटेड अफ इन्डियाको सहायक...
कस्तो छ वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप र कर्जाको पछिल्लो अवस्था ?
काठमाण्डौ । पछिल्लो एक सातामा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप र कर्जा दुवै घटेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए)ले आज सार्वजनिक गरेको वैशाख ३ गतेदेखि वैशाख ९ गतेसम्मको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो। एनबीएको तथ्यांकअनुसार यो एक साताको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप १० अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। योसँगै वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४३...
वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप रु. १२ अर्बले घट्यो, कस्तो छ सीडी रेसियोको अवस्था ?
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप दुई दिनमै १२ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए)को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वैशाख १ र २ गते वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप १२ अर्ब रुपैयाँले घटेको हो। योसँगै वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। गत चैत ३० गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४३ खर्ब ८९...
कृषि विकास बैंकको नाफा रु. १.९० अर्ब, एनपीएल सुधारमा प्रगति
काठमाण्डौ । कृषि विकास बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बढी नाफा आर्जन गरेको छ। जुन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ८.०९ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले २ अर्ब ७ करोड...
निफ्राको नाफा १७.८६%ले बढ्यो, रिजर्भ ३४.७४%ले घट्यो
काठमाण्डौ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा)ले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा बैंकले ६९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन सफल भएको छ। जुन गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा १७.८६ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले ५८ करोड ९२ लाख...
नवरत्न फ्री हेड मसाज क्याम्प फेरि सञ्चालन हुने
नबिल बैंक र चिकित्सक संघबीच विभिन्न बैंकिङ सेवाका लागि सम्झौता
बजार दोहोरो अंकले बढ्दा किन सुस्तायो कारोबार?
यस्ता छन् विश्व मन्दीको चपेटामा पर्नसक्ने ४ संकेत, कठिन समयमा काम लाग्न सक्छन् यी उपाय
गरिमा विकास बैंकका ग्राहकलाई ब्लुक्रस हस्पिटलमा आकर्षक छुट
इनड्राइभरद्वारा नेपालमा सेट-योर-अन-प्राइस राइड-हेलिङ एप सार्वजनिक
भिभोको भी सिरिजका स्मार्टफोनहरु नेपाली बजारमा
‘नीति तथा कार्यक्रममा पुँजीबजारलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक’
रु. १० अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंक, भोलि बोलकबोल